people Nepal » के थियो मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री स्थापितबीचको विवाद ? के थियो मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री स्थापितबीचको विवाद ? – people Nepal
मुख्यमन्त्रीसँगको विवादका कारण प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री केशव स्थापितलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको छ । शुक्रबार मन्त्री स्थापितलाई संविधानको धारा १६९ को उपधारा २ बमोजिम हटाइएको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका स्वकिय सचिव अनुप पौडेलले जानकारी दिए ।
तर, स्थापितले आरोपको खण्डन गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए । यसै विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्रजापतिको आरोपको खण्डन गर्दै प्रतिशोधमात्रै भएको बताएको थियो । यसअघि बिहीबार कुरा गर्दै स्थापितले सामान्य भनाभन भए पनि हटाउनैपर्ने गरी नभएको बताएका थिए ।